Save Money Iyadoo Kuwani Talooyin Exchange Lacagta Canadian
Dalxiisayaal inta badan ganacsiga sarrifka lacagta Canada, taas oo ah hawl maalmeedka. Dunida, waxaa jira tiro lacagaha qalaad oo kala duwan. Barashada tabo dhowr ah sarrifka lacagta Canadian kaa caawin kara inaad ugu of kharashkaaga dhigi.
Hoos waxaan ku qor doonaa qaar ka mid ah goobaha aasaasiga ah sida saxda ah halkaas oo aad si fiican u ganacsan laga yaabaa in. Waxa kale oo aanu kaala talin doonaa dhibaatooyinka qaarkood waxaa laga yaabaa in kici kuwan hababka sarrifka lacagta la bixiyaa.
sidayaal Airline – At madaarada, miisaska socotada ayaa lagu wadaa loogu beddelo lacagta. Heerarka Sarrifka waxaa lagu daro, kuwaas oo inta badan ka badan bixiyeyaasha kale sarrifka. madaarada intooda badan ka qaadaan heerka sare, taasoo laga yaabaa in aad lacag badan sida 20% ee wadarta baayacmushtari. Kuwanu waa meelaha ku haboon dadka safarka ah. Waa caadi effortless si ay u sameeyaan xawaalad iyo sidoo kale aagga waa anfacaya. Haddii aad wax kama qaba bixinta qiimaha sare, Garoonka uu ka mid yahay degaanka in ay lacagaha sarifka lacagaha.
hay'adaha bangiga Community – Baananka waxay bixiyaan adeegyo sarrifka lacagta Canada. Bangiyada intooda badan waxay bixiyaan qiimaha badan ka wanaagsan yahay madaarada. Bangiyada intooda badan lacag ugu horrayn ku salaysan qiimaha ganacsiga. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ah hay'adaha ka shaqeeya baanka, habase, waa saacadaha ay shaqeeyaan. Waxaa suurto gal ah oo kaliya in ay sameeyaan Xirfado saacadaha u furan. dhibaato kale waa in hay'adaha maaliyadeed ma laga yaabaa in boos in ay bixiyaan lacagta is dhaafsi ee xaddi weyn.
Kaararka Debit iyo Credit – Kaararka Debit iyo sidoo kale credit ku siin jidka ugu dhaqsiyaha badnaa in beddelan lacagaha qalaad. Sida caadiga ah heerka sarrifka waa tartan, oo aad noqon doontaa in aad hesho adeegyada exchange mar walba. Dalxiisayaal u baahan tahay inaad, Si kastaba ha ahaatee, xiriir la sameeyaan ay credit card ama kaarka debit shirkadda in ay u sheegaan in ay la dibada vacationing samaynta isticmaalka kaarka si loo hubiyo in ammaanka laga dhigin furi.
ATM aad bixiyaan siyaabo fudud in ay is dhaafsadaan lacag. Kala hadal bangiga oo ku saabsan lacagta waxaa laga yaabaa in ay jiraan isticmaalka ATM ka baxsan meesha aad degan tahay.
Sayidka, waxaad yeelan karaan dhowr hab si ay bedelan lacagaha sida diyaaradaha, hay'adaha bangiyada, credit cards iyo sidoo kale hubinta, iyo ATM. Kuwanu waa xal ugu ballaadhan loogu isticmaalay. Si kastaba ha ahaatee on Web ah, aad aragto laga yaabaa in aad links hanuuniyo helo habab dheeraad ah si beddelan Doolar Canadian ka ah talooyin sarrifka lacagta.
Iyada oo kala beddelashada lacagaha bangiga, buuxinta foomamka iyo saxiixdo jeeg kasta oo halka hore ee khasnaji a. Waad haysan kartaa jeegaga ah, oo haddii mid ka mid ah dhacdo in si khalad ah, waxa uu noqon lahaa fududahay, inay ku bedesho.
© 2018 guide currency.net A iswiidishka si ay u iibsadaan lacagta qalaad ee bucshiradaha iyo adeegyada dhoofinta. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan. site Admin · entries RSS · Comments RSS